टिकटकमा भाइरल बन्दै रमेश र कल्पनाको जोडी- रमेशले कल्पना बारे यस्तो भन्छन् …हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
मंग्सिर ८, २०७७ सोमबार 4
Prevएचएच ग्रुप युएईको तर्फ बाट सियोन नानुको लागि १०२९८०/- रुपैँया सयोग आर्थिक सहयोग…हेर्नुहोस् ।
Nextअभागीको हद ! एउटै व्यक्ति’लाई मलेरिया, डेंगु र कोरोना ! उनैलाई कोब्रा-सर्पले पनि टोक्यो…हेर्नुहोस् ।
रमेश प्रसाईंसँग मेरो प्रेम सम्बन्ध छैन हामी एकअर्कालाई सम्मान गर्छौं भनिन् कल्पना दाहालले…हेर्नुहोस् ।